ရင်ခုန်ဖွယ်၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေနဲ့ ဆပ်ကပ်ပွဲ
ဆပ်ကပ်ကြိုက်သည့် မြန်မာပြည်သူများအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် မြန်မာပညာရှင်များ ပေါင်းစည်းထားသည့် ဆပ်ကပ်အဖွဲ့တစ်ခုက နိုင်ငံတကာ ဆပ်ကပ်ပညာများဖြင့် ဖျော်ဖြေပေးနေသည်
မြန်မာနိုင်ငံက ဒေသအများအပြားမှာ သာမာန်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေ လူတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လာရင် ဒါဟာမကောင်းဆိုးဝါးတွေက ပူးကပ်နှောင့်ယှက်ကြတာလို့ ယုံကြည်သူ အများအပြားရှိကြပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် ရွှေရင်ကျော်လို့ လူသိများတဲ့ဂိုဏ်းက ပယောဂနှိမ်နှင်းတဲ့ဆရာတွေက တာဝန်ယူကြရပါတယ်။ ထွန်းခိုင် ရေးသားသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြမြို့ရဲ့တောင်ဘက် ၁၇ မိုင်လောက် အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ ရှမ်းရေကျော် အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းက ကျောင်းသူ တစ်ဒါဇင်ခွဲလောက်ဟာ.
ငွေလဲနှုန်းများ ပြန်လည်တည်ငြိမ်လာစေရန် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်က အစိုးရကို အကြံပြု
သုံးလအတွင်း ကျဆင်းသွားသည့် မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး ပြန်လည်တည်ငြိမ်လာစေရန်အတွက် ငွေလွှဲနှုန်း တည်ငြိမ်လာစေရန်၊ နိုင်ငံခြားရေး ပိုမိုရရှိလာစေရန်၊ ကျပ်ငွေဝယ်လိုအားကို မြှင့်တင်ရန်အပြင် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ အကြံပြု တိုက်တွန်းချက်များကို အစိုးရထံ ပေးပို့သွားမည်ဟု ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် (UMFCCI) က ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးသည် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလမှ ယခုလအထိ သုံးလအတွင်း.
ကေအိုင်အေစခန်းများကို တပ်မတော်က ဆက်လက် သိမ်းပိုက်နေ
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (ကေအိုင်အေ) ၏ အဓိက ခံစစ်ကုန်းတစ်ခုနှင့် စခန်းငယ် ခြောက်ခုတို့ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့က သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည်ဟု တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Eleven သတင်းထောက် သေဆုံးမှုအတွက် မုံရွာဒေသခံ သတင်းထောက်များ ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပ
မုံရွာသတင်းထောက်များနှင့် ကိုစိုးမိုးထွန်းကို ချစ်မြတ်နိုးသူများစုပေါင်း၍ ယခုပွဲကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုကိစ္စအပေါ် မုံရွာဒေသခံများ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှု မြင့်တက်လာစေရန်လည်း မုံရွာသတင်းထောက်များက ရည်ရွယ်ထားသည်။
သတင်းထောက်များ မေးမြန်းခဲ့သည့် မွတ်ဆလင်အမျိုးသားတစ်ဦး ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့သို့ အစိုးရအစီအစဉ်ဖြင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာ ၁၃ ခု သွားရောက်ခဲ့သည့်ခရီးစဉ်အတွင်း အင်တာဗျူးဖြေကြားခဲ့သည့် မွတ်ဆလင် အမျိုးသားတစ်ဦး အသတ်ခံခဲ့ရသည်ဟု ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
Telenor expands 4G network to three cities in Bago Region
Telenor has celebrated the expansion of its 4G service to three cities in Bago Region and plans to add more urban centres to the network in the coming months.